यो कस्तो प्रेम ! (कथा) – Chitwan Post
मेरा ज्ञानेन्द्रियहरुले दिमागमा पु¥याएको खबरबाट बन्ने अनुभूति अरुको भन्दा फरक थियो । मलाई आफूजस्ता देखिने सबै कच्चा र बच्चा लाग्छन् । मैले सामान्य तरिकाबाट नै स्कुले जिन्दगी बिताएर सपनाको ठूलो भारी बोकेर सहर आएकी थिएँ । जहाँ मैले आफ्नो भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने कोही थिएनन् । म नितान्त एक्ली थिएँ । सहर छिरिसकेपछिको पहिलो प्राथमिकता थियो पढाइ । म्यानेजमेन्टतर्फ भर्ना भएँ । यो समय मेरो पढाइ, कोठा र एक–दुई जना साथीहरुसँग नजिक हुँदाहुँदै बित्यो । मैले १२ पास गरेँ । अब मेरो सपनाहरुलाई जोगाइराख्नकै लागि भएता पनि जागिर मेरो अनिवार्यको विषय बन्यो ।
लगातारको प्रयासपछि पाएका जागिरहरुमध्ये पाँचौँ जागिरलाई आफ्नो बनाएँ मैले । अरु जागिर पनि ठिकै थिए, तर मेरो समयसँग अल्लि मेल खान सकेका थिएनन् । पछिल्लो जागिर पनि सोचेजत्तिकै त पाएकी थिइनँ, तैपनि त्यसलाई प्राप्त हुने तलबले समान बनाएँ । लगभग १४ जना स्टाफ भएको हस्पिटलमा जागिर पाएकी थिएँ । एकाउन्ट मैले हेर्ने विषय थियो । त्यहाँ भएका सबैसँग नजिक हुने क्रममा मेरो मन डाक्टरसँग अलिक नजिक बन्यो । त्यसो त, कलेजका सरहरुसँग पनि नजिक नभएको त होइन, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन पाएन मनले ।
म सुरूमा नयाँ भएर पनि धेरै कुराहरुबाट वञ्चितजस्तै थिएँ । तर, पछि पछि त्यो पनि सकियो । अरु स्टाफलाई काम लगाउँदा डाक्टरको पछाडि डाक्टरकै कुरा काट्ने स्टाफहरुसँग मेरो मन अथाह रिसाउँथ्यो । मलाई डाक्टरसँगै बसेर काम गर्न मन लाग्थ्यो । मलाई लगाउने डाक्टरको कामले मनमा छुट्टै किसिमको जोस र जाँगर थप्थ्यो । मलाई पाउने तलबले भन्दा पनि बढी डाक्टर शर्मासँगको कामले बढी तानेको थियो ।
मैले जतिसुकै सानातिना कुराहरु पनि सहजै सोधिदिन्थेँ शर्मालाई । जस्तैः ‘आज झगडा गरेर आउनुभयो र घरमा ? खाना खानुभएको छैन, हो ? सधैँ प्यासेन्ट प्यासेन्ट भन्दा भन्दा दिक्क लाग्दैन हजुरलाई ?’ यस्तै यस्तै । मैले सोध्ने प्रश्नहरु देखेर अरु स्टाफहरु तर्सिन्थे र भन्थे, ‘हामीले काम गरेको यति भैसक्यो तर अझैसम्म चाहिनेभन्दा एउटा कुरा पनि धेरै गर्न सकिएको छैन । तर, तिमी यति छोटो समयमा पनि कति धेरै नजिक भयौ !’
म शर्माका हरेक कुराहरुमा हराउन थालेकी थिएँ । मेरो मन नै यस्तै थियो । मैले जानीजानी आफ्नै जागिरको भन्दा पनि शर्माको सुरक्षा गर्न थालेकी थिएँ । मलाई शर्मा उपस्थित नहुँदाको हस्पिटल हस्पिटलजस्तै लाग्दैनथ्यो । मैले त भन्दिन्थेँ, ‘तपाईं यत्रो दिन बिदामा बस्ने रे, अनि हामी मात्र किन आउने नि काम गर्न ?’ साँच्चीकै मन, उमेर, सोचाइ सबथोक कच्चा नै थियो । मैले यसरी प्रश्नहरु गर्दा भन्नुहुन्थ्यो, ‘भनेपछि आफ्नै स्टाफले पनि मलाई बिदामा बस्न दिन छाडेँ !’ पछि पछि हाम्रो दूरी घटिरहेको थियो, शून्यमा पुग्नेजस्तै गरेर ।
शर्मासँग घर, गाडी सबथोक थियो । तर, ममा थियो त त्यही एउटा जिद्दी मन । जसलाई मैले जति गरे पनि आफ्नो वशमा राख्न सक्दिनथेँ । शर्मालाई लगभग १५ दिनमा एकपल्ट सामान लिन बाहिर जानुपथ्र्यो । एकपल्ट मलाई भन्नुभयो, ‘जान्छ्यौ र तिमी पनि मसँग ?’ यो मेरो लागि शर्माले दिएको पहिलो अवसर ठानेकी थिएँ जीवनको । मैले कत्ति पनि ढिला नगरी भनेँ, ‘लगे त जान्छु नि !’
म अर्को दिन शर्मासँगै शर्माकै गाडीमा बसेर काठमाडौँ गएँ । साँच्चीकै त्यो जीवनको पहिलो पल थियो, जसले मेरो खुसीलाई खुला आकासमा उडाएको थियो । जहाँ म र मेरो मनमा हक जमाएका शर्मा नितान्त एक्लै थियौँ । गाडीमा दूरी छोटिए पनि खुसीको लहर लम्बिरहेको थियो । मैले गाडीमै भएको बेला भनेकी थिएँ उहाँलाई, ‘तपाईं हस्पिटल नआएको दिन मलाई पनि आउन मनै लाग्दैन, अबदेखि तपाईं आउनुभएन भने म पनि आइदिन्नँ ।’ मैले यसो भनिरहँदा शर्मा मुस्कुराइरहेका थिए । हामी पछि एकअर्काको मनको कुरा बिसाउने चौतारी बनेका थियौँ । घरमा झगडा हुँदा, खान मन नलाग्दा, केही अनौठो सुनेमा वा देखेमा हरेक विषयमा हाम्रा कुराहरु हुने गर्दथे । म शर्माप्रति आकर्षित छु भन्ने कुरा शर्माले बुझेका थिए, तर बाहिर देखाएका थिएनन् ।
फर्किंदा अल्लि अबेर हुँदा पछि शर्मा मलाई छाड्न मेरो कोठासम्म आउँथे, तर कोठाभित्र भने पसेका थिएनन् । म भने तीनपल्टसम्म उहाँको घरमा भएका सानातिना प्रोग्रामहरुमा समावेश भएकी छु । मलाई उहाँकी श्रीमती र छोरीले चिन्छन् राम्रोसँग । हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो छ । शर्माको एउटा छोरा मभन्दा पनि जेठा छन्, उनले अस्ट्रेलियाबाट एमबिबिएस गर्दैछन् ।
मैले एकदिन हस्पिटलबाट उहाँकै गाडीमा फर्किंदै गर्दा भनेकी थिएँ, ‘अहिल्यै कोठामा जानै मन छैन मलाई ।’ मैले यसो भनिसकेपछि हामी रेस्टुरेन्टमा पुग्यौँ । जहाँ मैले पहिलोपल्ट भनेकी थिएँ, ‘मैले तपाईंलाइ प्रेम गर्न थालेकी छु, यो प्रेम तपाईंको लागि धेरै काँचो र कच्चा लाग्ला तर मेरो मनले जति गरे पनि मान्नेवाला छैन ।’ यसको जवाफमा आएको थियो, ‘फुच्ची, त्यस्तो भनेर हुन्छ त ! मेरो घरमा तिमीभन्दा ठूलो छोरा छ, बूढी छे जसलाई मैले यही समाजमा सिन्दूरले सजाएर भिœयाएको छु ।’
मैले यति कुरा सुनिसक्दा मेरा आँखा टिलपिल्याउन थालिसकेका थिएँ । मेरो अवस्था देख्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘अरु जे भए पनि हामी अहिलेको अवस्थामा जस्तै सधैँ रहन सके भैहाल्यो नि !’ उहाँले यो भन्दा मन खुसी भएको थियो । म पनि यही चाहन्थेँ कि उहाँलाई आफूसक्दो माया दिन सकूँ । मलाई उहाँको घरपरिवार बिगार्नु थिएन । म त सधैँ उहाँको राम्रो भएको हेर्न चाहन्थेँ ।
म एक त्यस्ती केटी हुँ जसलाई भविष्यको अनगिन्ती सपनाहरु बुन्नलाई फुर्सद नै छैन । म त वर्तमानमा रमाउने मान्छे हुँ । जे छ त्यसैलाई राम्रो बनाउने मान्छे हुँ । बनेको सम्बन्धसँगै ससाना झगडाका लहरहरु पनि झुन्डिएका थिए हामीमा । तर, ती २०÷२५ मिनेटभन्दा बढी टिक्न सक्दैनथे । पछिल्लो समयमा प्रायः शर्मा बाहिर जाँदा म पनि सँगसँगै जान थालेकी थिएँ । हामी हरेक तवरबाट जोडिएका थियौँ, शारीरिक होस् या भावनात्मक ।
मायाको जन्म मनबाट हुन्छ, तर यो समाजले आफ्ना मूल्यमान्यताहरुको पर्खालले ती स्रोतहरु थुनिदिएको छ । प्रेम उमेरअनुसार गर्ने चीज होइन । उमेर त एक प्राकृतिक चीज हो, जसलाई हामीले कसै गरे पनि छल्न सकिँदैन । आफ्नो मनले जसलाई भित्रैदेखि खोज्छ त्यही नै प्रेम हो । मनलाई उमेरले बनाएको हुँदैन र एउटै पनि हुँदैन । कसैलाई आफूभन्दा सानोसँग प्रेम गर्न मन लाग्छ, कसैलाई आफ्नै उमेर समूहसँग त कसैलाइ मैलेजस्तै । थाहा छ मलाई, उमेरको तगारो मनमा तेस्र्याएर भित्रभित्रै प्रेम गर्ने व्यक्तिहरु अनगिन्ती छन् यहाँ । मलाई लाग्छ, एकपल्ट पाउने जीवनमा प्रेम मनले चाहेकैसँग गर्नुपर्छ ।